Black Friday: dalabyada ugu fiican ee otomatiga guriga iyo codka | Warka Gadget
Miguel Hernández | 23/11/2021 17:47 | General, Noticias
El Black Friday Waxay ku dhowdahay geeska, iyo in kasta oo tani ay u muuqato inay sii jiri doonto, markan waxaan rabnay inaan horay u sii wadno uruurin xiiso leh. Sida sannad kasta, waxaan dib u eegnaa oo raadineynaa dalabyada alaabtaas aan isku daynay oo aan ku talin karno si daacad ah tanina waxay ahayd natiijada.
Kuwaani waa heshiisyada Jimcaha Madoow ee ugu wanaagsan marka loo eego otomaatiga guriga iyo codka, deji gurigaaga caqli badan oo dabcan ku raaxayso muusiga ugu fiican. Ha seegin iyaga, sababtoo ah waxaa la gaaray waqtigii aad ku badbaadin lahayd lacag yar adigoo iibsanaya waxaad had iyo jeer rabtay.
1 Amazon Echo Show 5 - Aragtida Koowaad ee Alexa
2 Roborock S7 - Nadiifiyaha Robot-ka ugu dambeeya
3 Jabra Elite 85t - Alaab wareegsan
4 Noocyada kala duwan ee alaabta Sonos
5 Huawei WiFi AX3 - Iyada oo leh WiFi 6 ee ciyaaraha iyo qalabaynta guriga
6 FreeBuds ee dhammaan noocyada iyo midabada
7 Soo jeedinno kale oo waaweyn oo ay tahay inaadan seegin
Amazon Echo Show 5 - Aragtida Koowaad ee Alexa
Bandhiga Amazon Echo Show waa mid ka mid ah beddelka ugu xiisaha badan ee ka mid ah kuwa isku dara codka iyo qalabaynta guriga ee isla badeecada. Xaaladdan oo kale, waxaan haysanaa qalabka codka ee Amazon Echo Dot oo ay weheliso shaashad yar oo shan inch ah, u samee tusaale ahaan si aan u awoodno inaan u maareyno qalabkayada IoT, u maareyno YouTube ama u gudubno Spotify hab fudud oo fudud, wax aad ayuu u ciyaaraa aaladan.
Bandhiga Amazon Echo Show 5 (2021) wuxuu leeyahay qiimo caadi ah oo ka sarreeya 89 euro iyo hadda Kaliya waa 44,99 euro, taas oo qiimo dhimis weyn u ah mid ka mid ah aaladaha ugu xiisaha badan iyo qiimaha ugu fiican ee lacagta Amazon ay ku leedahay buug-yaraha.Fiiri dib u eegistayada sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad mid ku dhameysato.
Roborock S7 - Nadiifiyaha Robot-ka ugu dambeeya
Nooca cusub ee Roborock S7 waa sharadka ugu hamiga badan laga bilaabo astaan ​​u suurtagashay in ay ka helaan meel muhiim ah suuqa si ay uga buuxaan nadiifiyaha faakuumka ee robotka. Waanu tijaabinay qaabkan oo si fiican ayuu u nadiifiyaa, wax dhibaato ah oo hawl-qabad ah ma laha, madax-bannaaniduna waa waalli. Waxaas oo dhan waxaa weheliya cusbooneysiin badan oo software iyo xitaa rugteeda qashin-qubka ee caanka ah Si toos ah uga farxin doona caajis kasta oo nadiifin ah.
Hadda waxay leedahay qiimo dhimis ah 150 euro, sidaas darteed Waxaad ku iibsan kartaa 499,00 euro, qiimo dhimis weyn Taas oo aragtidayda ay tahay nadiifiyaha vacuum ee ugu fiican ee robot-ka sanadka 2021. Ha moogaan falanqayntayada, sababtoo ah waxaad ku ogaan kartaa inay run ahaantii u qalanto.
Jabra Elite 85t - Alaab wareegsan
Si kale uma qiimeyn karo Jabra Elite 85t taleefoonnada gacanta waxay ku faanaan astaamo halkaas ku yaal oo leh cabbirro sarreeya. Jabra waxay mar hore la mid tahay tayada tan, mid ka mid ah alaabteeda ugu wanaagsan ee ku jirta buug-yaraha oo dhan, ma yarayn karto. Waxaan haynaa joojinta dhawaaqa firfircoon, batari raagaya iyo waxaas oo dhan oo ay la socdaan mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran ee suuqa ee ujeedadan.
Tayada dhawaaqu aad bay u wanaagsan tahay inkasta oo nashqadayntu ay tahay mid khatar ah, waxay calaamad u tahay kala duwanaanshaha waxa muhiimka ah, wax kasta oo la xidhiidha maqalka. Waxay leeyihiin qiimo caadi ah oo ah 228,99 euro, laakiin Qiimo dhimis 35% ah waxaad ku iibsan kartaa 149,99 kaliya inta lagu jiro usbuucan Black Friday on Amazon.
Noocyada kala duwan ee alaabta Sonos
Haddii aad raadinayso ugu fiican xagga tayada, qiimaha iyo isku xidhka, waa shaki la'aan Sonos. Halkan waxaan ku falanqeynay badeecadaha nooc kasta ah, laakiin markan waxaan diiradda saari doonnaa kuwa leh qiimo dhimis weyn. oo lagu daray 20% dhimis qalabyada Sonos ayaa bilaabay dhammaan isticmaalayaasha go'aansada inay wax ku iibsadaan shabakadeeda iyo qiimo dhimis la taaban karo oo ka mid ah Waxaan nahay Roam.
Dhinaceeda, waxaan ugu jeclaa sanadkan wuxuu ahaa Sonos dogob jiilka labaad, bar dhawaaqa awood leh, dhamaystiran oo ay la socdaan Dolby Atmos iyo caawiyayaasha farsamada ee ugu muhiimsan sida Google Assistant iyo Amazon Alexa, iyada oo aan la iloobin in ay la socdaan Apple HomeKit. Waxaad ku leedahay qiimo dhimis ka badan 30% Amazon si aad ugu iibsan karto kaliya 369 euro.
Huawei WiFi AX3 - Iyada oo leh WiFi 6 ee ciyaaraha iyo qalabaynta guriga
Alaabtan waxaan ku raaxaysan karnaa heerka WiFi 6 con 802.11ax / ac / n / a 2x2 iyo 802.11ax / n / b / g 2x2 iyo MU-MIMO,wax intaa ka badan iyo wax ka yarba ma jiraan. Processor-ka waxaas oo dhan wada waa a GigaHome Quad-Core 1,4 GHz taas oo mas'uul ka noqon doonta in si caqli-gal ah loogu qaybiyo calaamadda, iyo sidoo kale noo oggolaaneysa inaan ku raaxeysano astaamaha codsiga AI Life ee Huawei oo aan gadaal ka hadli doonno. Waxa kaliya ee haray in la xuso, in kastoo aan horay uga soo hadalnay, waa inaan NFC ku leenahay saldhigeeda.
Qiimo dhimis Dukaanka Huawei Taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku iibsato 39,90 euro oo keliya iyadoo si degdeg ah bakhaaradooda loogu keenayo, ama haddii aad doorbidayso in guriga lagugu soo diro qiimo dhimis 60% ah oo Amazon ah oo aad sidoo kale ka iibsan karto 39,99 euro. Daacadnimo, haddii aad weli haysato router-ka shirkaddaada, waxay durba qaadanaysaa wakhti aad ku tagto noocii ugu dambeeyay ee laga heli karo WiFi 6.
FreeBuds ee dhammaan noocyada iyo midabada
Taleefannada dhegaha-dhegaha ee TWS, oo leh dhawaaqa joojinta, dhegta-gudaha, dhaqameed ... Waxaad haysataa kala duwanaansho aan dhammaad lahayn oo ku jirta kala duwanaanshaha FreeBuds, telefoonnada dhegaha ee Huawei waxaanan isku daynay si dhab ah dhammaantood waxaanan kugula talineynaa kuwa soo socda si waafaqsan dhadhankaaga iyo baahiyahaaga:
Buds Bilaash ah: Tayada dhawaaqa aan la barbar dhigi karin, joojinta buuqa ugu horumarsan ee suuqa iyo qiimaha ugu fiican, waad iibsan kartaa ka hooseeya 99 nooca cawlan iyo nooca cad. Doorashada gourmet-yada ugu badan.
Buds Bilaash ah 4: Sameecado dhegaha-dheg-dhegeedka ah oo leh dhawaaq firfircoon laakiin aan joojinayn, nidaam makarafoon wanaagsan iyo nidaamyo siman oo caqli-gal ah oo loogu talagalay kuwa ugu raaxada badan ee doorbidaya inay la shaqeeyaan maalinta oo dhan, kaliya 109 euro.
FreeBuds 4i: Iibka caqliga leh, ee leh joojinta buuqa, madax-bannaanida weyn, raaxada iyo wax kasta oo ka sarreeya dhammaan noocyada kala duwan ee qiimo aad u macquul ah, kaliya 49 euro.
Soo jeedinno kale oo waaweyn oo ay tahay inaadan seegin
Dreame T20: Nadiifiye awood leh oo badan oo leh qalabyo badan oo loogu talagalay, awood nuugista oo ay weheliso dhammaan agabyada lagama maarmaanka u ah nadiifinta qoto dheer ee maalinlaha ah, shaki la'aan u taagan beddelka Dyson, kaliya 254 euro on Amazon.
Amazon Fire TV Stick Max: Haddii aan baraneyno inaan iibsano Stick TV-ga caadiga ah sababtoo ah uma baahnid wax ka badan nuxur HD buuxa ah, farqiga u dhexeeya waa mid cajiib ah. Hadda oo leh WiFi 6 iyo Dolby Atmos waafaqid dhammaan awoodda iyo hagaajinta had iyo jeer, qiimaha qosolka kaliya 38,99 euro (40% dhimis).
Gen afraad Amazon Echo: Amazon Echo waa ikhtiyaarka ugu horreeya ee Amazon ay kuu diyaarin karto haddii aad rabto inaad ka bilowdo guri ku xiran Zigbee adigoon u hurin tayada codka kuu oggolaanaya inaad dhegeysato muusikada. In kasta oo ay run tahay inay bixiso qiimo sare, laakiin way korodhay marka loo eego qaabkii hore, waxaan haynaa jiilka afraad ee Amazon Echo Dot oo ka socda € 59,99 (BUY).
Si la mid ah, waad gudbi kartaa qaybta dib u eegistayada halkaas oo aad ka heli doonto alaabooyinka aan falanqeynay sanadka oo dhan iyo in shaki la'aan ay u muuqan karto bedel aad u xiiso badan hadda oo qiimaha la dhimay Black Friday.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Black Friday: Waxa ugu fiican ee la soo bandhigo otomaatiga iyo codka guriga
Black Friday: Waxa ugu fiican warbaahinta badan, agabka iyo kuwa la xidho